eNasha.com - जब् फेयरको अनफेयर अन्त्य र हामी युवा
- निमेष कोइराला
शनिबार रोजगार मेला नमीठो भेलामा परिणत भएपछि म एउटा साधारण विद्यार्थीलाई के लाग्यो भने सपनाको खेती गर्ने र गराउनेहरुको अब खैरियत छैन । युवाहरु राजनीतिक दलको गुलियोका कारण यति बढी तीतो महसूस गर्न थालेका छन् कि उनीहरुलाई हत्तपत्त अब कुनै आश्वासनले पनि छुन छाडिसक्यो र यदि आश्वासन पूरा भएन भने उनीहरु यति हिंस्रक हुन सक्छन् कि मिडिया हाउस पनि भन्ने छैनन् र सुरक्षा निकायलाई पनि टेर्ने छैनन् ।
केही बुद्धिजिवीहरु के ठान्छन् भने अहिलेका युवा हातबाट फुस्किसके । उनीहरुलाई उमत्याइँ लागिसक्यो । उनीहरु न त अभिभावकको डर मान्छन्, न त समाजकै ! खुला छाडिएको साँढेको रुपमा युवाहरुलाई चित्राङ्कन गर्न थालिएको छ । तर यस्तो आरोप लगाउनुअघि एकै छिन तिनले सोचून्, जब तिनले नगर्नु कुकृत्य गरेर, कंगाल देश हाम्रा लागि छाड्नेछन्, फोहोर राजधानीलाई अस्तव्यस्त छाडेर परमधाम हुनेछन्, पिउने पानीसमेत बाँकी नराखेर हामीलाई काकाकुल हुन बाध्य पर्नेछन् ? निकट भविष्यमा यो हुन गइरहेको छ, अनि युवाहरुको आक्रोश किन मत्थर हुन्छ ?
पढ्न बस्यो, लोड सेडिङ ! बिहान कलेज पढेर डेरा फर्कियो, खानेपानीले समयमा पानी नदीने ! दिउँसो घुम्न निस्कियो, ट्राफिक जाम ! कुसमय ग्याँसको हाहाकार ! समयमा कलेजको परीक्षा हुँदैन ! समयमा न त रिजल्ट नै आउट हुन्छ ! के यी सब कुराको दोषी हामी हौ ? यदि हामी होइनौँ भने हामी संलग्न नरहेको जुनसुकै विवादास्पद र खराब कुराका लागि हाम्रो रिस जायज हुँदैन र ? त्यसैले हरेक पटक यहाँ टायर बल्छ । त्यसैले हरेक आन्दोलनका हाम्रो रगत त्यत्तिकै उम्लन्छ । त्यसैले हरेक विध्वंशमा हाम्रो 'इमोशन' विष्फोट हुन्छ ।
देशका प्राकृतिक श्रोतहरुलाई ठेक्कामा दिएर आफूपछिको पुस्ताका लागि केही पनि बाँकी नराख्नेहरुलाई हामीले किन सम्मान गर्ने ? देशको सिमानालाई राजनीतिको सिंढी बनाएर सत्तामा बसिरहनेहरुलाई फेरि हामीले त्यही सिंढी किन दिने ? हाम्रो भविष्यमाथि खेलवाड गर्दै देशलाई रात चौगुना दिन दुइ गुना लुट्नेहरुप्रति हामीले किन भावुकता पालिरहने ? यी र यस्ता धेरै कुराहरु युवाका मनमा आउँछन्, आएका छन् । तर के अघिल्लो पुस्ताले हाम्रो यो जायज चिन्ता, जायज माग र जायज रहरलाई कहिल्यै बुझ्ने प्रयास गरेको छ ?
यदि बुझ्ने प्रयास गर्दैन भने आउँदा दिनमा अझै क्षति बेहोर्छ, अझै तोडफोड र ध्वंश मच्चिन्छ । के पहिलो पुस्ताले यही खोजिरहेको हो ?